﻿Download I-Windows 8 Language Interface Pack (LIP) from Official Microsoft Download Center
I-Windows 8 Language Interface Pack (LIP)
Windows 8 Language Interface Pack (LIP) ikunikeza Umsebenzisi oguqulelwe kwezo ndawo osetyenziswa kwiindawo ezininzi zikaWindows 8.
iPhekhi yeIntafeyisi yoLwimi ye-Windows (LIP) inikeza ngohlelo oluguqulelweyo ngokungaphelelanga lweendawo ezisetyenziswa ngokubanzi kakhulu zeendawo ze-Windows. Emva kokufakela i-LIP, iteksti kwiiwizadi, kwiibhokisi zencoko, iimenyu, nezihloko zoNcedo neNkxaso iya kuboniswa kulwimi lwe-LIP. Amagama angaguqulwanga aza kubalulwimi olusezntsi lukaWindows 8. Umzekelo, ukuba uthenga uhlobo lwe-Spanish lweWindows 8, kwaye ufake i-Catalan LIP, amanye amagama aza kuhlala ekwiSpanish. Ungafakela i-ILP engaphezulu kwenye kulwimi lwesiseko olunye. Ii-Windows LIP zingafakelwa kuzo zonke iintlelo ze-Windows 8.
Eyemfuno zenkqubo, cofa u- apha
Ngaphambi kokuba ufake, cofa apha
Cofa i- Khuphela qhosaha kweli phepha ukuqalisa ukhuphela, okanye ukhethe ulwimi olwehlukile kuluhlu olwehlile.
Ukuqalisa ufako ngoko nangoko, cofa u-Qhuba.
Ukugcina ukhuphelo kwikhomuyutha yakho ukufaka ngelinye ixesha elizayo, cofa u- Gcina
Ukuze ufumana Imiyalezo yasemveni koFaka, cofa u-apha
NgeNgxaki eYaziwayo, cofa u- apha